Yangu iPhone Microphone Haisi Kushanda! Heino Kugadzirisa. - Iphone
iphone 6 itsva haina sevhisi
safari isina kubatana neinternet iphone
ndiri pano kugadzirisa yako @ bhatani
Yangu iPhone Microphone Haisi Kushanda! Heino Kugadzirisa.
Iwe ugere muhofisi mako, wakamirira runhare kubva kuna mukuru wako. Paano pedzisira kufona, iwe unoti 'Mhoro?', Kungosangana naye, 'Hei, handisi kukunzwa!' 'Aiwa kwete,' unofunga iwe pachako, 'maikorofoni yangu ye iPhone yaputsika.'
Neraki, iri idambudziko rakajairika nePhones nyowani nekare. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura sei yako iPhone maikorofoni haisi kushanda uye kufamba iwe nhanho-nhanho-kuburikidza maitiro ekugadzirisa iyo iPhone mic .
Kutanga, Bvunzo Uye Ongorora Yako iPhone's Microphone
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kana maikorofoni yako ye iPhone yamira kushanda ndeyekuyedza uchishandisa akasiyana maapp. Izvi zvinodaro nekuti yako iPhone ine mamaikorofoni matatu: imwe kumashure yekurekodha vhidhiyo odhiyo, imwe pazasi yekufonera mafoni uye mamwe marekodhi ezwi, uye imwe iri munzeve yekufona.
Ndingaedza Sei Maikorofoni Pane Yangu iPhone?
Kuti uedze maikorofoni epamberi neshure, pfura mavhidhiyo maviri anokurumidza: imwe uchishandisa kamera yekumberi uye imwe uchishandisa kamera yekumashure uye woiridza zvakare. Kana iwe uchinzwa odhiyo mumavhidhiyo, vhidhiyo maikorofoni yacho iri kushanda zvakanaka.
Kuti uedze maikorofoni yepasi, tangisa iyo Izwi Memos app uye rekodhi memo nyowani nekutsikirira iyo bhatani rakakura dzvuku pakati pechidzitiro.
Vhara Chero Zvishandiso Izvo Zvine Kuwana Kune Microphone
Zvinogoneka kuti Anwendung iyo inokwanisa kuwana Microphone iri kukonzera dambudziko. Iyo app inogona kunge yakadonha, kana Microphone inogona kunge iri kushanda mukati meapp. Unogona kuona kuti ndeapi maapplication anokwanisa kuwana Microphone nekuenda ku Zvirongwa -> Zvakavanzika -> Microphone .
Vhura iyo switch switch yekuvhara maapps ako. Kana yako iPhone iine Chiso ID, swipe kumusoro kubva pasi pekona kusvika pakati pekona. Kana yako iPhone isina Face ID, pinda-pinda bhatani reKumba. Zvadaro, shandura mapurogiramu ako kumusoro uye kubva kumusoro kwekona.
Kana iwe ukaona kuti imwe yeako maikorofoni efoni inonzwika kusanzwisisika mushure mekuyedza kana isina ruzha zvachose, ngativachenese. Yangu nzira yandinofarira kuchenesa mamaikorofoni e iPhone ndeyokushandisa bhurasho remazino rakaoma, risingashandisike kuchenesa maikorofoni grill pazasi pe iPhone yako uye maikorofoni diki dema dot kurudyi kwekamera yakatarisa kumashure. Ingorerutsa bhurasho rezino pamusoro pemakrofoni kuti ubudise chero chinhu chakanamatira muhomwe, tsvina, uye guruva.
Iwe unogona zvakare kushandisa yakamanikidzwa mweya kuchenesa yako maikorofoni e iPhone. Kana iwe ukatora nzira iyi, zvakadaro, ita shuwa yekumwaya zvinyoro nyoro uye kure kure nemakrofoni ivo pachavo. Mhepo yakamanikidzwa inogona kukuvadza mamaikorofoni kana ikamwayiwa padyo padyo nepadyo - saka tanga nekupfapfaidza uri chinhambwe woswedera padyo kana uchida.
Ita shuwa kuyedza yako maikorofoni ye iPhone zvakare mushure mekuchenesa. Kana iwe ukaona kuti yako maikorofoni ye iPhone ichiri kusashanda, enda padanho rinotevera.
Yangu iPhone Microphone Zvakadaro Haisi Kushanda!
Nhanho inotevera ndeyekugadzirisa zvakare zvirongwa zve iPhone yako. Izvi hazvibvise chero zvemukati (kunze kwemaWi-Fi mapassword), asi zvichaisa zvese zvako zvegadziriro zve iPhone kudzokera kufekitori default, kudzima mabugs angave ari kukonzera kuti maikorofoni yako asapindure. Ini ndinokurudzira zvikuru kutsigira foni yako usati wabvisa zvigadziriso zve iPhone yako.
Ini Ndinogadzirisa Sei Zvangu Zvirongwa zveIfree?
Kutanga iyo Zvirongwa app pane yako iPhone uye tinya iyo general sarudzo.
Dhura kusvika pasi pekona uye tapota Dzorera zvakare bhatani.
Tinya iyo Dzorerazve Zvese Zvirongwa bhatani pamusoro pekona uye simbisa kuti iwe unoda kuseta zvese zvigadziriro. Foni yako inozotangazve.
ndeupi musiyano uripo pakati pemessage uye meseji
Chishandiso Firmware Dzosera (DFU) kudzoreredza iri rekupedzisira danho iwe raunotora kuti utonge kunze kwesoftware dambudziko. Izvi zvinodzoreredza uye zvinonyorazve mutsara wega wekodhi pane yako iPhone, saka ndizvo Zvakakosha kuidzosera pakutanga .
Tarisa uone yedu imwe chinyorwa kuti udzidze maitiro ekuisa yako iPhone DFU modhi !
Huya nePhone Yako Mukugadzirisa
Kana mushure mekuchenesa yako iPhone uye kugadzirisa rese masetingi iwe unowana iyo yako iPhone maikorofoni zvakadaro haisi kushanda, inguva yekuunza yako iPhone kuti igadziriswe. Ive neshuwa yekutarisa chinyorwa changu pane dzakanakisa nzvimbo kuti yako iPhone igadziriswe yekufemerwa.
iPhone Microphone: Yakagadziriswa!
Yako iPhone maikorofoni yakagadziriswa uye unogona kutanga kutaura kune vako vokukurukura zvakare. Tinokukurudzira kuti ugovere ichi chinyorwa pasocial media kubatsira shamwari dzako uye mhuri kana maikorofoni yavo ye iPhone isiri kushanda. Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo, siya mhinduro pasi pazasi!